Musikana wendove - ZimbOriginal
April 23, 2022 March 30, 2021 by ZimbOriginal
Kare kare, mune mumwe musha maiva nemurume ainzi Tigere. Tigere aiva nevakadzi vakawanda. Mumwe wevakadzi ava ainzi Sekai. Sekai akanga asina mufaro nokuti aishaya mbereko. Airwadziwa nekuona vana vevamwe vachitamba. Vamwe vakadzi vaimuseka nokumushora. Hapana aida kufambidzana naye. Zvese izvi zvaishungurudza Tigere. Vakafamba mun’anga dzakasiyana-siyana asi hapana yakavabatsira.
Rimwe zuva Sekai akashanyira imwe chembere yaigara yoga nokuti aiziva nhamo yekushaya shamwari. Chembere yakafara ikatenda zvikuru. Sekai akaibatsira kuchera mvura nekutsvaga huni.
Vakatandara Sekai ndokutaura dambudziko rake. ‘Ndinodawo mwana,’ akadaro Sekai. Akataura zvese zvavakanga vamboedza naTigere. Chembere yakateerera. Yakazoti kwaari, ‘Iwe wandiitira zvakanaka, saka neni ndichakuitirawo zvakanaka.’
Chembere yakatora ndove ndokuumba mwana. Yakaisa mwana uya muchibereko chaSekai. ‘Chiteerera unzwe,’ yakadaro chembere. ‘Kana mwana uyu akura haafanire kupinda mudanga remombe.’ Sekai akapemberera akatenda zvikuru. Akavimbisa kuti mwana wake haaizofa akapinda mudanga. Sekai akadzokera kumba kwake. Akaudza murume wake zvakanga zvaitika.
Mushure memwedzi mipfumbamwe Sekai akasununguka mwana musikana. Sekai naTigere vakafara zvikuru. Vakatumidza mwanasikana wavo zita rekuti Ruva.
Ruva akava mwana akanaka aiteerera amai vake. Akakura achiziva kuti aisafanira kupinda mudanga.
Ava mhandara, Ruva akasangana akadanana nemukomana ainzi Muendesi. Izvi zvakafadza Sekai, asi zvaimutambudzawo. Aida kuti mwana wake aroorwe, asi aitya kuti aizonzi apinde mudanga.
Nguva yekuroorwa kwaRuva yakasvika vanhu vakapemberera. Ruva akaonekana nevabereki vake akaenda nemurume wake.
Vamwene vaRuva vainzi AMuchaneta. Vaiva nemwoyo wakaoma, asi Ruva aingoteerera nekushanda nesimba. Hapana basa raaizeza kana kuramba kuita.
AMuchaneta vakazonzwa guhwa rekuti Ruva akanga asingatenderwi kupinda mudanga. Ipapo vakafunga zano rekumupfidzisa.
Rimwe zuva Muendesi aenda kumunda, AMuchaneta vakadeedza Ruva. ‘Enda kudanga utore ndove yekudzura mumba,’ vakadaro kwaari. Ruva akavhunduka. Akatya kuvaudza kuti akanga asingatenderwi kupinda mudanga. ‘Ndichiri kubata mamwe mabasa emumba,’ akapindura Ruva. AMuchaneta vakasimbirira nyaya yacho kusvika Ruva abvuma. Ruva akatora tswanda yake akaenda kudanga.
AMuchaneta vakaona Ruva asina kudzoka, asi havana kuziva zvakanga zvaitika.
Zuva rovira, Muendesi akadzoka kubva kumunda. Akanetseka apo akashaya Ruva. ‘Usanetseke,’ vakadaro AMuchaneta, ‘achadzoka zvake.’ Kunze kwakasviba Ruva asati adzoka. AMuchaneta vakazotaura kuti vakanga vamutuma kudanga. Muendesi akamhanyira kudanga akawana tswanda yaRuva. Akadaidzira, ‘Ruva! Ruva!’ asi hapana akamupindura. Akatanga kuchema achienda kuvabereki vaRuva.
Muendesi akataurira Sekai naTigere zvakanga zvaitika. Sekai akaridza mhere, Tigere akabata musoro. Vatatu ava vakasimuka vakaenda kudanga riya.
Vasvika kudanga Sekai akatanga kuimba achichema. Akaimba rumbo rwaipisa tsitsi achidaidza Ruva. Vakashama vachiona musoro waRuva uchinyuka kubva mundove. Sekai akaramba achiimba vakaona Ruva achinyuka zvishoma nezvishoma. Mutsipa, mapendekete, nechipfuva zvakanyuka. Maoko, dumbu, hudyu, nezvidya zvakanyuka. Makumbo netsoka zvakanyuka. Vachiona Ruva, Muendesi, Sekai naTigere vakafara zvikuru.
Ruva akaudza Muendesi kuti akanga ava kudzokera kuvabereki vake. Muendesi akasara achichema zvaipisa tsitsi.